Summary of books in Nepali/ "The Pragmatist’s Guide To Relationships" पुस्तकको नेपालीमा सारांश - LweoNepal
Summary of books in Nepali/ “The Pragmatist’s Guide To Relationships” पुस्तकको नेपालीमा सारांश
Posted on: August 31, 2020 Last updated on: October 7, 2020 Comments:0Categorized in: सेक्स र अभिभावकीय Written by: Admin
Summary of the book “The Pragmatist’s Guide To Relationships” in Nepali/नेपालीमा सारांश
सारांश: सफल सम्बन्धका लागि व्यावहारिक मार्गनिर्देशन/Guide
The Pragmatist’s Guide To Relationships पुस्तक प्रेम, dating, यौन, विवाहको लागि उपयुक्त
साथी खोज्न र उनिहरुसगं स्वस्थ तथा खुसियालि जिवन बाच्न सिकाउने एक विस्तृत, व्यावहारिक गाइड guide हो।
केहि मानिसहरूलाई “Naturally – सफल ” career को अपेक्षा राख्ननु अनौंठो लाग्न सक्छ, तर Naturally उत्तम सम्बन्धको आशा भने सामान्य रुपमा सबैमा हुन्छ।
तपाईले आफ्नो जीवनवृति career को योजना बनाउने र तयारी गर्ने काममा धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ। तपाईले सफल जीवनवृतिको लागि सामान्य रुपमा हप्तामा ५० देखि ६० घण्टा सम्म मेहेनत गर्नु हुन्छ।तपाईको ठूला लक्ष्यहरू छन्, र तपाईलाई थाहा छ कि केवल कडा परिश्रमले तपाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
किन तपाईं आफ्नो सम्बन्धको बारेमा पनि यस्तै विचार राख्नु हुन्न? हामीलाई थाहा छ कि ठूलो क्यारियरको लागि कडा परिश्रम गर्नु आवश्य छ, तर हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रो सम्बन्धहरू भने (without effort)स्वाभाविक रूपमा फूल्ने /राम्रो हुने छन्। चिन्ता नलिनुहोस्, यो सबै मानिसहरुले गर्ने गल्ती हो जुन हामी सबैले समय-समयमा गरिरहेका हुन्छौ। तपाईं एक्लो हुनुहुन्न।
तर सत्य यो हो कि तपाईको सम्बन्धहरूले तपाईको खुशीमा केहि भन्दा बढि प्रभाव पार्दछ। विचार गर्नुहोस्: एकल घोडाले ८०० पाउण्ड तान्न सक्छ, तर जब दुई घोडाले सँगै काम गर्दछन्, तिनीहरूले २४०० पाउण्ड तान्न सक्छन्। यो ३ गुणा लाभ, मात्र २ गुणा धेरै परिश्रमको परिणाम हो !
जसरी जानबूझेर intentionally बनाइएको एक रणनीतिले तपाईंलाई ठूलो career निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ, त्यसरिनै जब तपाईं पार्टनर अधिग्रहण र सम्बन्ध संरचनाको बारेमा सोच्नुहुन्छ, तब तपाईंको सम्बन्दमा असाधारण सुधार आउनेछ। र यस्तै चिजहरुको बारेमा Simone र Malcolm Collins ले तपाईंलाई The Pragmatist’s Guide To Relationships पुस्तकद्वार मद्दत गर्नेछन।
Collinsले यस दर्शनको माध्यमबाट मानिसहरूलाई उत्थान गर्न The Pragmatist Foundation सुरू गरेको छन्, र यस सस्थाका सबै पुस्तकहरूका आयहरू दानcharityमा जान्छन्। The Pragmatist’s Guide To Relationships सम्बन्धका सबै अवयवहरूको लागि अत्यन्त विस्तृत पुस्तिका हो। यसले तपाईंको जीवनमा तपाईंलाई चाहिएको व्यक्तिहरू भेट्टाउन, तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न, र उनीहरूको वरिपरि रहन मद्दत गर्दछ।
यस पुस्तकमा उपस्थित अनगिन्ती उपयोगी र आँखा खोलिने पाठहरूमध्य यी ३ पाठहरुद्वार, हामी सफल जीवनका लागि साझेदार खोज्न ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं :
यहाँ 12 Relationship सम्बन्ध lures/जाल प्रलोभित गर्ने तरिका छन्, जुन् तपाईं एक patner पाउन र कायम राख्नको लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाइँको patner र उसगंको सम्बन्धमा सीधा असर गर्दछ।
विवाह एक उपयोगी प्रचलन हो किनभने यसले जीवन-साझेदारpatner हरूलाई एक अर्काको मानसिक भार साझा गर्न दिन्छ।
सबैभन्दा ठूलो आत्म-सुधार, कसैसँग विवाह गर्नु हो, जसले तपाइँलाई तपाइँको आदर्श आत्म बन्न मद्दत गर्छ।
के तपाईं आफ्नो सम्बन्ध सीपलाई अर्को स्तरमा लैजान तयार हुनुहुन्छ? ल आउनुहोस् !
पाठ १:एक उत्तम पार्टनर खोज्नका लागि यि6कुशल सम्बन्ध relationship lures प्रयोग गर्नुहोस्।
Collinsका अनुसार,यि relationship lures भनेको तपाईंले सम्भावित पार्टनरलाई प्रस्ताव गर्ने मूल्य हो। यसले साझेदारीको छोटो र दीर्घकालीन गुणस्तरको लागि चरण सेट गर्दछ, त्यसैले यसको बारेमा राम्रोसगँ जान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
Relationship lure भनेको fishing lure (माछालाई प्रलोभनमा पार्न प्रयोग हुने चारा) जस्तै हो। यदि तपाईं एक खास प्रकारको सम्बन्ध राख्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले निश्चित तरिका अपनाउनु पर्छ। जब हामी “सबै मानिस उस्तै हुन्छन्” भनेर सोच्छौ, तब हामी केवल कसैलाई गलत बाटोमा आकर्षित गर्न कोशिस गरिरहेका हुन्छौं। यदि एक माछावाला सबै माछाको जुंगा हुन्छ भन्ने सोच्छ भने, तब उसले केवल क्याटफिश मात्र समात्न डिजाइन गरिएको चारा प्रयोग गर्दछ – र उसले क्याटफिस मात्र पाउछ।
Collinsले कुल १२ lures को बारेमा वर्णन गरेका छन्। पहिलो ६ – प्रभुत्व, राम्रोपन, यौन अन्वेषण, सहजता, चुपचाप, वा प्रेमको प्रतिज्ञा जस्ता lures राम्रो सम्बन्धलागि अक्षम छन्। तिनीहरूले अस्थिर सम्बन्धको निर्माण गर्दछन्। एक राम्रो, दिगो सम्बन्ध सुरक्षित गर्न, यि अन्तिम ६ lures कार्यकुशल छन्ः
Pygmalion/पिग्मेलिओन : व्यक्तिलाई आफ्नो Potential को पहिचान गरी, उनीहरुलाई उनको ति Potentialमा “काम गर्न र सुधार” गर्न प्रेरित गर्नुहोस् ।
Status/ स्थिति: देखाउनुहोस् कि तपाईं कसरी तिनीहरूको जिवन-पद्धति लाई उच्च देख्नुहुन्छ।
Self-Identity/आत्म-पहिचान: हाईलाईट गर्नुहोस् कि कसरी तपाईंसँगको सम्बन्धले तपाईंको इच्छित पार्टनरको आदर्श दृष्टिकोणलाई अझ सुदृढ बनाउँछ।
Friend With Benefits/लाभको साथ मित्रता : कहिलेकाँही, घनिष्ठ मित्र हुँदा सम्बन्ध मा संक्रमण सजिलो बनाउन सक्छ।
Long-Term Relationship/दीर्घकालीन सम्बन्ध: यदि तपाईं स्पष्ट रूपमा आफ्नो partnerलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ कि तपाईं दीर्घकालीन सम्बन्धको खोजीमा हुनुहुन्छ , यसले तपाईंलाई त्यस्तै सम्बन्ध राख्न मद्दत गर्दछ।
Social Construct/सामाजिक संरचना: कसैलाई भेट्नको लागि Matchmaking अझै उत्तम तरिका हो। साथिहरुद्वार Matchmaking गर्दा व्यक्तिको बानीहरु आफ्ना साथीहरूले जाँच गरेका हुन्छन्, जसकारण समूहमा साझा मूल्यमान्यता हुन्छ, र राम्रो Patner छनौट गर्न मद्दत मिल्दछ !
यी luresहरूको उपयोग एक राम्रो सम्बन्ध राख्न गरिने प्रयास को अन्त होइन सुरुवात हो। ती luresहरु बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोस्, र, एकचोटि तपाईंले आफ्नो Patner फेला पार्नुभयो भने, वास्तविक काम सुरु हुन्छ!
पाठ २: राम्रो वैवाहिक जीवनको सौन्दर्य भनेको मानसिक बोझको साझेदारी हो।
मेरी श्रीमतीले हाम्रो फाइनान्सको बारेमा कहिले पनि सोच्दिनन्, तर उनले मलाई मेरो काममा मद्दत भने गरिरहेकि हुन्छिन्। मैले किराना सामानहरू बारे चिन्ता लिनुपर्दैन, तर म श्रीमतीलाई खाना बनाउनमा ​​ सधै मद्दत गर्छु। यसलाई Collinsले (cognitive integration/संज्ञानात्मक एकीकरण) भन्छन्।
जब तपाईं मिलेर काम गर्नुहुन्छ, तपाईंले दुई गुणा बढी कार्य गर्न सक्नुहुनेछ। यो अगिको दुई घोडाको उदाहरण जस्तै हो जहाँ केवल एउटा घोडाको भन्दा दुई घोडाले ३ गुणा बढी तान्न सक्छ।
संज्ञानात्मक एकीकरणको तीन चरणहरू हुन्छन्:
संज्ञानात्मक बिभाजन तब हो जब मानिसहरू केवल रूममेट हुन्छन्, जसले केही आम्दानी साझा गर्छन्, यौन सम्बन्ध राख्छन्, र सायद बच्चा वा घरपालुवा जनावरहरू साझा रुपमा राख्छन्। यदि तपाईं संज्ञानात्मक रूपमा पाइलिएको सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले एक अर्काको बीचमा सम्पूर्ण जीवन कर्तव्यहरू विभाजन गर्नुहुन्छ, जस्तै बच्चा हुर्काउने वा फाईनेन्स।
यो ग्राफिकले तपाईंलाई पछिल्लो दुई चरणहरु बीचको भिन्नता बुझ्न मद्दत गर्दछ:
एउटा रूख मा बिभिन्न हांगा, काण्ड/डाँठ, र पातहरूको भाग छन्, अर्को चाँहि बढी एकीकृत छ, र त्यसैले यसले अझ बढी संज्ञानात्मक भारलाई घटाउन मद्दत गर्दछ!
पाठ३: एक त्यस्तो साथी खोज्नुहोस् जसले तपाईंको “Potential/क्षमता”लाई Unlock र सुधार गरन्न मद्दत गर्छ र आफुले पनि उसलाई मद्दत गर्नुहोस्।
भनिन्छ: “मानीसहरू परिवर्तन हुन्छन् भन्ने आसामा कहेलै बिहे गर्नु हुँदैन ।” यसमा केही सत्यता छ, तर व्यक्तिहरू सँधै परिवर्तन हुन्छन्, र तपाईले तपाईको साथी र आफुलाई,” आफैंको उत्कृष्ट संस्करण बन्न मद्दत गर्ने अवसर पनि सिर्जना हुन्छ” ! एक राम्रो साथिको कल्पना गर्नुहोस् जसले तपाईलाई तपाईको भलाई निम्ति प्रेरित गर्छ।
हामी सबै चाहन्छौं कि हाम्रा साथीहरूले हामीलाई समर्थन गरून्, तर जब सहयोगी प्रेमीहरूको कुरा आउँछ,तब समाज प्रोत्साहित हुँदैन। कोलिन्सले भनेको जस्तै:
यो सत्य हो कि तपाईले विवाह गर्नु भएको व्यक्तिको साथ तपाई तपाईको बाँकी जीवन बिताउन सक्नु पनि हुन्छ वा सक्नुहुन्न, तर तपाईंको Patnerले तपाईलाई परिवर्तन गरेको व्यक्तिको रूपमा बाँच्नु बाहेक तपाईंसँग कुनै विकल्प भने हुदैन।
त्यसकारण तपाईंले एक त्यस्तो साथी खोज्नु पर्छ जसले तपाईंको बर्तमानलाई सम्मान गर्छ र तपाईंलाई उचाइमा पुग्न प्रोत्साहित गर्छ। प्राय: जसो, तपाईले पहिल्यै देखि आफुमा परिवर्तन गर्न चाहानुहुने बानी/चिज नै, तपाईको Patnerले पनि तपाईंमा सुधार/परिवर्तन गर्न चाहिरहेको हुन सक्छ, त्यसैले सम्बन्धमा परिवर्तन जति गाह्रो सुन्निन्छ त्यति गाह्रो हुँदैन।
यस्तै तपाईंको पार्टनरलाई पनि स्वस्थ सम्बन्धको लागी प्रशिक्षण दिन, उनीहरूको खराब कामहरूमा निराशा व्यक्त गर्नुहोस् र प्रशंसा गरेर उनीहरूको राम्रो कार्यमा गर्व गर्नुहोस्।
Tagged as: book book summaries in nepali book summary nepali summary summary of book in nepali summary of books in nepali नेपालि
Previous Post Summary of books in Nepali /”Living In Your Top 1%” पुस्तकको नेपालीमा सारांश
Next Post Summary of books in Nepali /”Doubt” पुस्तकको नेपालीमा सारांश